Longboards - iSearch
Start Ilmaha & Ilmaha Waqtiyada firaaqada iyo safarka Longboards
Xadhiga midigta ee habka darawalnimada ee la doorbidayo
1 Liiska Waxyaabaha 2017
2 Waa maxay xayawaan fiican oo fiican
3 Sidee buu shaqeynayaa?
3.1 Faa'iidooyinka iyo goobaha codsiga ee dheeriga ah
3.2 Waa maxay nooca Longsborad?
3.3 Maxaan u baahannahay in aan eego marka aad iibsanayso dhejin?
3.4 Macluumaad kooban oo ku saabsan shirkadaha hormoodka ah
4 Internetka. Khabiiro: Halkee ayaan ka iibsan karaa jadwalka ugu wanaagsan?
5 Taariikhda Longboard
5.1 Tirooyinka, xogta, xaqiiqda ku saabsan jadwalka
5.2 FAQ - su'aalaha badanaa la isweydiiyo
6 Laydhadhka kirada ama iibsiga?
7 Laydhadhka si loo isticmaalo si sax ah?
8 Doorashada laydhka saxda ah?
9 Xaq u yeelashada wadista dhejiska?
10 Qalabka waxtarka leh
Liiska Waxyaabaha 2017
Ninetysixty Kickpin Dhammaystirkii Longboard, Bamboo ...
Ka iibso Amazon
Mike Jucker Xilliga Hawaii ee Bamboo WAAHAAdvertisement
Sagaashan satan Boobam Flex adag oo Longboard ah,
JUCKER Hawaii Longboard New HOKU Flex 2 bandhigay
Mindless Longboards Longboard Dhammaan Qabaa'ilka ...
Waa maxay xayawaan fiican oo fiican
Darawalnimada Dhibicda Boodhiga ee qeexaya dareenka muujiyay in dad badan oo jecel inay xiriir la yeeshaan cayaarahan. Waa wax aad uwanaagsan oo aad rabto inaad ogaato waxa uu yahay guddiga noocan ah. Sida walxaha oo dhan, tayada qalabka isboortiga waxaa loo tixgeliyaa inay tahay arrin muhim ah, oo ah farsamooyinka iyo madadaalada la filayo in lagu dhejiyo karti fiican. wanaagsan Longboards waa tayo sare, maadaama ay soo saarayaashu had iyo jeer isku dayaan inay bixiyaan alaabta ugu fiican iyo naqshadeynta. Dabcan waxaa jira kala duwanaansho, waxaana jira noocyo kala duwan oo ku yaalla muddada dheer. Halkaan qof walba wuxuu heli karaa qoob-ka-ciyaarka, socdaalkiisa, maskaxda iyo hoos-u-jiidashada ama guddida xayawaanka. Kuwani waa noocyada ay tahay inaad xasuusato, iyo Freeride & Downhill iyo sidoo kale Doolarka Dancing, waa halkii laguugu taliyay khaanadaha khibrada leh. Dallacaadyadani waxaa loogu talagalay in lagu barto xirfadaha iyo xawaaraha sare. Sida bilowga iyo bilowga, waa in aad diirada saartaa guddiga socdaalka, maaddaama dariiqyadaas loogu talagalay loogu talagalay wadista baabuurka ee magaalada. Xadhkaha wanaagsan waxaa lagu gartaa lakabyo fiican, dhejisyo tayo sare leh iyo cabbirada ku habboon. Dabcan, waa inaad sidoo kale fiirisaa naqshad aad u xiiso leh qaar ka mid ah jadwalka kore iyo, sida aad u sheegtay, u tababbar naftaada noocyada noocan ah. Maaddaama ereyada dheeraadka ah ee hore loo soo bandhigay, guddiyadani way dheer yihiin oo ballaadhan yihiin, sida barafka caadiga ah.
Sidee buu shaqeynayaa?
Xirfadlaha kubbadda cagta waa asalka maanta ee qalabka isboortiga ee casriga ah iyo qoob-ka-cayaarka caadiga ah ee toddobaadyadii qarnigii la soo dhaafay ayaa ah asal ahaan ka mid ah buug-gacmeedyada kuwaas oo aad ku iibsato maanta. Waxaa si fudud loo sharxay sida ay guddidu u shaqeyso, laba qalab oo laqabad leh oo leh lakabyo adag ama jilicsan, ayaa lagu rakibay boorso laga soo saaro caag ama balaastik. Sharaxaaddani hadda waa mid sahlan, laakiin wax soo saarka iyo weriyayaasha sannadaha badan waxay qaadeen qaabab aad u xiiso badan oo xiiso leh dusha sare, si aad u boodo ama u xoqdo gudigooda horay u socodka. Farsamadu waa sahlan tahay in la fahmo, afartanka duuban ee labada garab ayaa loo qaabeeyey si la mid ah ciddii cagaha ku dul istaagtay guddiga waxayna si cad u bixisaa cagta oo loogu talagalay ciidamada wadista. Pongs, Carving, Flex, Pump, Dropthrough iyo Concave waxay ka mid yihiin noocyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa, waxaadna maqli doontaa shuruudahaan marka ay dadku si fudud u muujinayaan tirooyinka dhaqdhaqaaqa iyaga oo wata magaalooyin. Waxaa durbadiiba faahfaahin ka bixinaya waxa aad arki kartid marka ay la socdaan barbaariyeyaashu oo soo bandhigaan xirfadahooda. Xoogga iyo adkaysiga guddiga waa in ay hore u saxaan, sidoo kale qoob-ka-soo-saarka la duubay waa inay soo geliyaan waxyeello badan iyo culeys.
Faa'iidooyinka iyo goobaha codsiga ee dheeriga ah
Faa'iidada ugu muhiimsan ee dheeriga ah waa suurtogalnimada inaad u guurto magaalooyinka leh daba-galka iyo carving. Waxaad u isticmaali kartaa Lacagta Lahaanshaha adiga oo ah habka gaadiidka aadna u qaadi kartid guddigan adiga oo kugu dhow. Meelaha, socodka lugaha iyo aagagga lugta ayaa si fiican ugu habboon haddii aad rabto inaad u guurtid sida shaati-yada waaweyn ee magaalooyinka. Meelo badan ayaa ku soo degaya oo kaliya waxaad u baahan tahay guddiga iyo madaxa iyo ilaalinta jilibka. Hadda uun, haddii aad tahay mid aad u khibrad badan, waxaad dhab ahaantii ku tababari kartaa cayaarahan oo aad ku tababarataa jilayaashaada. Si dhakhso ah u raadi baashaalayaal kale, kuwaas oo adiga kula wadaagaya markaa isboortiga si wadajir ah. Longboarders ma aha mid kali ah oo kali ah, sababtoo ah mid ayaa doonaya in uu isha cabbiro oo uu barto tirooyinka cusub iyo xirfadaha cusub. Waxaa sidoo kale jira dad caan ah oo ku yaal magaalooyinka badan, halkaas oo aad si wada jir ah ula wadaagto xiisaha kale. Tani waa meesha cusub ee la abuuro, oo had iyo jeer wadaagto khiyaamo cusub iyo, sida aan u sheegay, faa'iidada ugu muhiimsan, waxaad u baahan tahay oo kaliya ujiifin wanaagsan, waxaadna qayb ka tahay goobaha dheeriga ah.
Waa maxay nooca Longsborad?
- Looxyada yaryar sida carvin iyo noocyada tartanka
- Laaluushada dhaadheer sida noocyada isdaba-joogga iyo dardargelinta
Maxaan u baahannahay in aan eego marka aad iibsanayso dhejin?
- Cabbirka jirka iyo miisaanka
- Habka darawalnimada loo isticmaalo.
Qiimaha iyo qiimaha
Macluumaad kooban oo ku saabsan shirkadaha hormoodka ah
Looxyada brand this waxaa gerägt in ay fikrad ah ee Mike xuduudda ku Jucker, taas oo soo saari kara kuwan waxyaabaha la rabitaankiisa iyo wacdaro ee noociisa ah.
Roogeeyaa waa soo saaraha oo soo bandhigaya alaabteeda iyada oo loo marayo qaab cajiib ah iyo fiidiyowyo. Gaadhi, oo leh kooxo waaweyn, waxay isticmaalaan alaabteeda iyo sidoo kale si toos ah u samaysa alaabtaas. Halkan, sidoo kale, waxaa jira dhiirranaan ka dambeysa alaabooyinka, kuwaas oo soo jiidanaya xamaasadda cayaaraha ee alaabta.
Solid waa nooc caan ah oo laga soo qaado Maraykanka iyo halkan tayo wanaagsan iyo xulasho aad u qurux badan oo dhaadheer adag iyo waxyaabo kale oo la mid ah ayaa la soo saaraa.
Dhalinyaradaani waxay noloshooda ka dhigaan kuwo ka fiican sida falsafadda shirkadda. Waxyaabahani wuxuu bixiyaa naqshad farsamo iyo qaabab xiiso leh oo ay weheliso naqshado waaweyn.
Inkasta oo Madrid ay ku taala Spain, shirkaddaan xayeysiiska ah ayaa xarunteedu tahay California oo ku taala Maraykanka. Jerry Madrid waa ciyaaryahan xamaasad leh oo ka danbeeya calaamadahan iyo waxyaabaha wanaagsan. Taariikhdaas koontooyinkan waxay bilaabmaysaa sanadaha ugu dambeeyay 60 iyo maanta shirkadkan ayaa bixiya qalabka wanaagsan ee qof kasta oo daneynaya.
Tilmaamahan wuxuu ka yimaadaa kooxo duulimaadyo ah oo mustaqbalka Yurub ah iyo alaabooyinkani waxay ku xiran yihiin horumarka joogtada ah ee sheyga. Iyada oo la adeegsanayo tijaabooyinka dhabta ah ee kooxda warshadaha ayaa had iyo jeer ka shaqeeyay horumarinta brand iyo alaabta.
Internetka. Khabiiro: Halkee ayaan ka iibsan karaa jadwalka ugu wanaagsan?
Halkee baad ka iibsan kartaa dhejintaada cusub? Haddii aad iibsato ganacsiga gaarka ah ama laga yaabo inay ka jaban yihiin bixinta internetka. Dukaamo badan ayaa bixiya dukaamo khaas ah oo adeega ah, si toos ah talobixinta si loo iibiyo waxa loo malaynayo inuu u baahan yahay. Halkan waxaad sidoo kale fiirin kartaa oo eegaysaa moodooyinka xiisaha leh ee warshadaha si fiican loo yaqaan iyo kuwa caanka ah ee dhererka. Dhinaca kale, ganacsatada internetka ayaa si toos ah u iibiya waxa aad dhab ahaantii rabto, iyo badanaa qiimaha hoose. Sida dhammaan alaabooyinka kale, waxaad si toos ah u barbar dhigi kartaa ganacsiga internetka, haddii aad go'aansatid inaad ku dhejiso wixii aad rabto inaad iibsato. Ugu dambeyntiina, wax badan ayaad ka baratay kumbiyuutarada wanaagsan, aadna hadda ogtahay waxa ay tahay inaad eegto markii aad dooraneysid calaamadda cusub.
Taariikhda Longboard waa horey u jirtey waxayna bilaabmaysaa sanadaha soo socda ee 60. Dhammaantood waxay bilaabeen inay ku faafaan dusha sare ee xeebta Venedik Beach ee Maraykanka. hirarka Bad iyo fursad yar oo dabaysha iyo hirarka waxay keentay in qaar ka mid ah isticmaalo naftooda ayaa ka fiirsaneysa inay dunida in ay xir kaliya labo ka mid ah rollers on iyada surfboard. In jidadka California buur ah agagaarka Santa Monica iyo Beverly Hills taariikhda longboard ayaa si ay waddadii. Laga bilaabo bilowdani waxay ahaayeen horumarin xirfad leh, gudiyada ayaa loo qaabeeyey si qoto dheer leh. Jaangooyadu waxay qaadatay kooraskeeda waxayna u guurtay California ilaa xeebta bari ee Maraykanka. Sanadihii ugu dambeeyay cayaartu sidoo kale waxay la kulantay nooc ka mid ah doorka labaad oo xitaa la iloobey waqtigeeda. Si la mid ah kubbadda cagta, isboortiska kale ayaa horey u soo maray waxaana uu ka roonaaday farxadda Longboard. Maanta arkaa horeba xoogaa ka duwan, oo sanadihii la soo dhaafay 10 ah mid marwalba goobta ayaa soo saartay, ayaa ka farxiyay internetka isboortiga ee longboarding tago la stunts iyo warar video. Looxyada xardho, iyo ka saaciday inay ku fuushaa longboard tiradda hadda waa mid ka mid ah ciyaaraha aqoonsan yahay iyo gaar ahaan ka saaciday inay iyo xardho waa in magaalooyin badan image caadiga ah on meelo badan. Maanta waxaa jira xataa dhacdooyinka iyo sidoo kale in Europe, Longboard ayaa u ordaan si sax ah mar kale culus aasaasay. Sheekada ayaa guul aad u badan hadda in dhacdooyinka qaar waxay leeyihiin abaalmarino lacag caddaan ah oo waaweyn iyo longboarding hadda waa mid ka mid ah ciyaaraha sida runta xiiso leh stunts cajiib ah, tabaha iyo tirooyin aad u dhiirran. looxyada ku helay si wanaagsan oo wax ku yahay siduu ku habboon shuruudaha casri ah ay sugeen maanta.
Tirooyinka, xogta, xaqiiqda ku saabsan jadwalka
Haddii aad u baahan tahay lambarada, xaqiiqooyin iyo tirooyin, ka dibna aad leedahay si ay wax ka qaban marka hore in longboard ah waa in ku saabsan dheer, mid ka mid ah dhidibka 107 cm ayaa width ah oo ku saabsan 26 cm oo uu leeyahay doorka in tirada 78 80 A ama A. Gaar ahaan, aad u cusboonaynta karaa iyo iibsan faasas kale accessories ama ka iibsan duub shaqsi adag ama jilicsan. Guddiga dusha kuraasta waxaa laga sameyn karaa fibre-gaaban, kumbuyuutar ama waxyaabo kale oo aad u qurux badan. design ayaa, waxaa jira waxyaabo badan si ay u soo sheegaan, sababta oo dalab waa mid aad u weyn oo aad ka heli doontaa la shuruudaha iyo xaqiiqooyinka aad longboard. Miisaanka dhererka wanaagsan, wuxuu ka socdaa 2,5 kg ilaa 3,5 kg. Dabcan waxaa jira qaabab khafiif ah iyo sidoo kale qaababka culus ee guddiyadan.
FAQ - su'aalaha badanaa la isweydiiyo
- sidee ayuu u shaqeynayaa mudada dheer?
Xadhkaha waa shaati leh oo leh 25 cm cm width iyo dhererka 100 cm. Waxay leedahay laba lakab oo la riixo, lakabana badanaa waxay ku jiraan size78 A ama 80 A
- sidee loo isticmaalaa dhejinta?
Longboards waxay ku kala duwan yihiin noocyada, kuwaas oo ku saleysan laynka isticmaalaha. Foomka ugu fudud ayaa ah tartanka, ka dibna xayawaanku wuu yimaadaa, noocyada kalena way ka sii dheereeyaan oo baabuurkoodu baabi'i karaa.
- Ma jiraa farqi u dhexeeya dhejiska iyo shaashadda?
Longboards iyo skateboards waa isku mid. Kaliya cabbiradu way ka duwan yihiin, Katebartu waa mid caqligal ah, gaaban oo aan u ballaaranayn sida dhererka.
Laydhadhka kirada ama iibsiga?
Adiga oo ah iibsadaha mustaqbalka ayaa la yaabi doona haddii aad marka hore amaahato ama aad iibsato isla markiiba? Haddii aad rabto inaad tijaabiso imtixaanka wadista ee ugu horeysa, waa inaad ka amaahatid guddi. Waa inaad marka hore go'aan ka gaartaa inaad rabto inaad ku tababarto isboortiga. Skater ama skateboarders ayaa si sahlan ugu beddelan kara daahirada iyada oo aan wax dhibaato ah iyo waxyaabo fiican oo aad u isticmaasho si xoogan, waa inaad adigu si shakhsi ah u iibsataa. Xeerkani sidoo kale wuxuu khuseeyaa kumbuyuutarka.
Laydhadhka si loo isticmaalo si sax ah?
Ma khaldami kartid isticmaalka kumbiyuutarrada sababtoo ah waxaad go aansaneysaa in aad isticmaasho qaabka aad dooratay si aad u socoto ama si toos ah loogu dhajiyo. Haddii aad ka yartahay khibradda dheeraadka ah, waxaad ka fakari kartaa haddii aad rabto in aad tijaabiso xirfadahaaga wadista inta lagu guda jiro meeraha ama xawaareynta. Marna ma isticmaali kartid guddi qaldan. Wixii dariiqa raba sida roonaanta sida maskaxda iyo hoosta, waa inaad fiiro gaar ah u hesho alaabta la soo iibsaday. Haddii aad isticmaashid guddi aad u fudud, halkan kuma badna inta aadan ku qanacsanayn qaababka darawalnimada.
Doorashada laydhka saxda ah?
Markaad dooranayso badeecada saxda ah, u tilmaan naftaada jirkaaga iyo miisaanka jidhkaaga. Ha welwelin haddii aad tahay qof bilawga ah ama bilowga ah marka aad wadid baabuur iyo wakhti aad ku iibsato. Waxaad u baahan tahay guddi ku haboon xirfadahaaga wadista. Waxaad u baahan tahay si ay u eegaan oo keliya ma aha in ay design iyo brand, laakiin dhammaan saarayaasha had iyo jeer ay leeyihiin guddiyada on dalab, kaas oo ku haboon yihiin bilowga ah iyo Cruiser.
On the Guddi talo-bixin ah oo dheer Waxaa jira waxyaalo badan oo soo iibsasho ah oo loogu talagalay dhererka saxda ah.
Xaq u yeelashada wadista dhejiska?
Haddii aad tahay laylis ah oo bilowga ah, waa inaad marka hore la barbarta ka qabtaan. A fudud oo ku habboon ka saaciday inay guddiga waa doorasho sax ah. Waxaad hadda rogo kartaa, dhigi aadin iyo jimicsiyo kale ilaa aad ka dareento in aad aqoon ku filan kala guurka ah, si ay Hababka kale wadista. Haddii aad tahay qof ayaa hore u soo ururiyey waayo-aragnimo kobaha la baabuurta la mid ah ama xataa u isticmaali longboard fudud, waa in aad doorato Longboard ku habboon ka kala duwan ee weyn ee saarayaasha. Isticmaalka si dhib leh waa ogyahay xuduudaha, maxaa yeelay, drive tani waa soo jiidasho leh oo aad la yaabi doonaan sida wanaagsan wax ka waxaa la siiyaa ee lagu daydo kala duwan.
Qalabka waxtarka leh
Haddii aad raadinayso qalabka loogu talagalay dhererkaaga, waxaad ka helaysaa difaaca jilicsan, koofiyadaha iyo galoofyada. Xitaa haddii aad sameysid waxyaabahaan nabadgelyada ah, qalabku wuxuu ku siinayaa xargo kala duwan oo kala duwan, darajo adag iyo midabyo. Waxaad haysataa ikhtiyaarka iyo sidoo kale laydhka waxaa jira fursado kasta oo ah qalabyo, kuwaas oo buuxiya fikradahaaga shakhsiyadeed ee wadista waditaanka. Waxaa sidoo kale jira qalab ku habboon, sida furaha iyo shucaaca, kaas oo kaa caawin kara inaad ku habboonaato qalabka isgoysyada iyo wareegyada. Dalabku wuu sii wadi doonaa, sababtoo ah dharka u dhigma ayaa sidoo kale ah calaamad muhiim ah oo loogu talagalay waardiyeyaasha iyo inaad horay u aragto in cayaaraanku aad u xiiso badan yahay. Waxaad heleysaa dalabyo badan oo internetka ah oo aad go'aan ka gaartid waxa adiga ku faraxsan oo xiiso leh inaad sii wado. Haddii aan dhererka kuugu jirin adiga, fiiri fuulo, ka badan.
Xayawaan bixinta 1
Apollo Longboard Nebula Daabacaadda Gawaarida Buuxda ee leh Xawaaraha Sare ee ABEC Ball Bearings incl. T-Tool Skate, Ka Duulaya Freeride Skateboard Cruiser Boards.
The Apollo Longboard Nebula, tayada iyo qaabka midaysan!
Sanduuqa ayaa ah 1016mm x 246mm (40 x 9,7inch) ballaaran, oo laga sameeyay lakabyo alwaax ah oo loo yaqaan '8', oo ku yaal Qaababka TwinTip ee casriga ah ee leh Dropthrough iyo Mini Double Kicks
7inch madow (245mm ballaaran) geesaha alwaaxyada waa lagala laabanayaa oo DT ayaa la rakibay, iyada oo la raacayo 95A Bushings
Castors: Dhexroor 70mm, Width 51mm, Adkeyn 78A, Midab Caddaan, Phosphorescent (Iftiimin mugdi ah), Qaadashada ABEC 9 RS
Guddigaaga oo dhammaystiran waxaad ka heli doontaa Qalabka T-Qalabka kaasoo keena wax kasta oo aad ugu baahan tahay guddigaaga. MUSTAQBILAAHAN MUUQAAL DHAQANKA DHAMMAAN. 14er, 13er iyo 10 hex iyo furaha iskutallaabta. Sababtoo ah kala soocidda midab ee aan kala go 'lahayn, xulashada midabka aaladda ayaan suurtogal ahayn.
Xayawaan bixinta 2
PLAYSHION Longboard 39 inch incl. T-Qalabka, oo ay kujiraan ABEC-9 kubado kubadeed, hoos udhac ah isteerinka skateboards Cruiser cabirka
Masraxa waa 990mm x 230mm weyn, oo ka samaysan alwaax qariidad xNUMX leh naqshad simmetrical ah
Thanks to tiknoolijiyada isu-tagga udub-dhexaadka, guddigu wuxuu sameeyaa daba-wado iyo sidoo kale wuxuu keenaa xasilooni badan oo bilowga ah
Thanks to 70mm x 50mm SHR 78A gawaarida, guddiga ayaa si ammaan ah u riixaya meelaha dusha sare ee wadada
Gawaarida 7-inch aluminium ee leh ABEC-9 kubbadda kubadaha, oo ay la socdaan 90A Bushings
Guddiga waa u fiican yahay socodka, carving, hoos u dhaadhaca, freeride iyo freestyle
Xayawaan bixinta 3
Boorarka FunTomia ee alwaaxa laga sameeyay iyo alwaax xayawaanka ah ee tallaabooyinka dabacsanaanta ah ee 3 - Ku daadiya guddi dhammaystiran oo leh wejiga xawaaraha sare ee 'Mach1'
FunTomia Bamboo Maple Longboard waxaa lagu dalban karaa 2 heerarka kala flex kala duwan. / Xul u yeelo qaabka aad rabto, fududahay kala duwanaanta kore. (Flex1: to 122kg) - (Flex2: to 84kg)
Xirfadlayaashu way ogyihiin in kumbuyuutar ka samaysan boodhadhka astaamaha sida qaab ahaan loo dhisay ay taageerto dabacsanaanta isla markaana ay sahlayso wadista baabuurta. Ereyga camber macnihiisu waa in alwaaxdu leedahay akhlaaq wanaagsan. Guddigu waxaa kor loogu qaadaa ilaa 2cm, taasoo dhalisay is beddel wanaagsan marka la bilaabayo. Sanka iyo garaacista waxaad ku samayn kartaa xeelado badan.
Qoryaha aluminiumku waxay ku qancinayaan waxyaabo badan oo xakameynaya habdhaqanka wadista. Waad ku mahadsantihiin lakabyada leh 80A adag adag, guddiga ayaa leh meel aad u xasilan.
Dhaqdhaqaaqa waa qaabka fiilooyinka qumman ee meesha ay laalaabku ku darsamaan meel dhexdhexaad ah ee dusha sare ee dusha sare. Kulanka noocaas ah ee qiiqa wuxuu keenaa meel hoose oo u dhow waddada, taasoo keentay boos hoose hoose ee guddiga.
Mambalka Mobilka ee loo yaqaan 'Camber Bamboo Maple Longboard' oo leh Nose iyo Kicktail wuxuu aad ugu habboon yahay Cruisingboard ama Slides. Qalabka camber-ku wuxuu sidoo kale ku habboon yahay xawaaraha sare wuxuuna leeyahay dabeecad hagitaan aad u wanaagsan. Aad ayey u xasilloon tahay waana fududahay in lagu safro dariiq kasta.
Xayawaan bixinta 4
Deuba Atlantic Rift Longboard 112x 26 cm - 44Inch - ABEC 7 - Xulashada Gudiga Joogtada ah ee Pintail Streetstley Motif
【CUDURKA】 Boodhadhka dhaadheer ee naqshadeynta daadinta ayaa ka kooban birta kubbadda leh ee loo yaqaan 'ABEC 7', oo u adkeysan karta xawaaraha sare, sidaa daraadeed si xawli iyo dhaqso leh ayuu usocdaa.
【STABILITY】 Qalabka aasaasiga ah (garabka) wuxuu ka samaysan yahay alwaax 9-qoryaha, kaas oo siinaya xasiloonida sare ee user. Cayrintu waxay ka samaysan tahay aluminium sare oo sarreeya.
AT TILMAAMAHA lle Gawaarida PU waxay xaqiijinayaan in si habsami leh usocdo iyadoo ay ugu wacan tahay adkaanshaha 85A. Doorarka lagu dhejiyay kubbadaha waa kuwo aad u adag oo la isku halleyn karo oo aan fiicneyn xitaa marka lagu jiro safarada ugu dheer.
SAFETY】 Qalabka ladagaalanka ah (boogta) ayaa ku siinaya xakameyn ku xiran kuraasta, sidaas darteed waxaad haysataa meel amaan ah iyo xaaladaha ugu fiicnaanta khiyaamada qaboobaha iyo feeraha kulul, xitaa roobka roobka iyo guddiga qoyan.
【DESIGN】 Haddii aadan kaliya daryeeli doonin qaabka looxidhidhka dhejiska, waxaad filan kartaa naqshad jilicsan oo ku yaal gadaasha kaas oo lagu foorarsado guddiga oo lagu qiimeeyo naqshadeynta.
dalabXayawaan bixinta 5
Nick iyo Ben dheer oo loox alwaax ah oo dhererkoodu yahay 92cm 36 inch oo dhammaystiran oo guddi ah
Boorarkaaga qabow oo alwaax laga sameeyay oo laga sameeyay alwaax xiiran Naqshadaha 5 waa macquul! Kala doorashada sida loo heli karo!
Waxaad heli kartaa kala duwanaansho looxyada sawirka leh! Naftaada ha la yaabto!
Thanks to dhidibka ballaaran, goluhu waa fiican yahay in la fuulo giraangirahana si fiican ugu rogaan meel xoogaa roon.
Ka shaqeynta sare! Alaabo tayo sare leh! Duub midab jilicsan!
Dhererka dhererkiisu yahay 92 cm / ballaca (barta ugu ballaadhan) qiyaastii.
Xayawaan bixinta 6
FREISPUR Longboard Cruiser 39 inji, oo leh qiyaasta kubadaha ABEC-9, hoos udhigista soosaaraha freerider
Deedka shaashaddan dheer waa 990mm x 235mm ballaaran, oo laga sameeyay xNUMX lakabyo xaabo maple leh naqshado kala duwan.
Thanks to 70mm x 50mm SHR 78A giraangiraha, guddidu waxay u kala baxaan si habsami leh oo nabadgelyo leh dusha sare ee wadooyinka adag.
Guddigu waxay leeyihiin dabacsanaan xoogaa adag waxayna ku siin doonaan cagtaad sugan.
Waxaa lagu qalabeeyay ABEC 9 kubbadda cagta, 90A Bushings, goluhu waa xiritaanka saxda ah ee bilowga iyo horumarsan.
Iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda is-soo-dejinta, guddigu waxay ka dhigaan safar fiican.
Xayawaan bixinta 7
Kryptonics Adult SK15161949 Longboard 38 "Daadinta, Skateboarding / Skateboard, Sports & Leisure Cast Off, Midabbo kala duwan, M-Muujinta
Kryptonics "Cast Off" waa shaashadda ugu habboon ee loogu talagalay dhaqaajinta dheer iyo doonnida fudud.
Sanduuqa wuxuu bixiyaa wax walba oo qalbiga dhererkiisu jecel yahay dusha sare ee 97 x 25 cm.
Shaqada tayada sare leh ee lagu sameeyay Abec 5 - birta kubbadda iyo rollers polyurethane waxay xaqiijineysaa shuruudo ku habboon bilowga iyo xirfadleyda labadaba.
Intaa waxaa sii dheer, xirmooyinka qaab-dhismeedka leh ee loo qorsheeyay ayaa xaqiijinaya dhaqanka hagaha ugu habboon iyo xasilloonida la doonayo.
Boorsadaas dheer oo ka socota guriga dhaqameed ee Kryptonics, waad fuulan kartaa oo waad sii deyn kartaa: Bixi Garabkaaga Naafada ah!
dalabXayawaan bixinta 8
Kryptonics SK13157568 alwaax 37 inch ah hoos udhac ah oo dhameystiran oo leh ABEC 5 kubado qalooc ah, iskeetbo - iskoolka
Kryptonics “Surfcity” waa alwaaxda saxda ah ee dhaqdhaqaaqa dheer iyo doonyaha fudud oo soo jiita skater kasta oo ku yaal 94 x 24 cm.
Longboard Kryptonics wuxuu leeyahay muuqaal jilicsan oo muuqaal leh. Qaabka loo yaqaan 'concave qaabka' iyo giraangiraha adag waxay ka baxaan wax aan la dooneynin.
Masaafada u dhexeysa xadka weyn iyo guddiga laastikada waxay kicisaa argagax waxayna hubisaa xasilloonida wadista wanaagsan xitaa xawaare sare.
Waa alwaax aad ufiican oo loogu talagalay isticmaaleyaasha horumarsan, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay bilowgayaasha. Qaadashada Abec 5 waxay ka sameysan tahay bir tayo sare leh iyo 62 x 51 mm dabeysha laga sameeyay urethane waxay bixiyaan guryaha ugufiican orodka.
Gawaarida aluminiumka aad u adkeysiga leh waxay xaqiijinayaan xasilloonida la doonayo. Gaarigaaga xoree!
Xayawaan bixinta 9
MAXOfit Deluxe Cruiser Longboard (Mammut No.15)Anzeige
Longboard ist nicht gleich Longboard - Qualität und Güte zum Sonderpreis, Aktion solange der Vorrat reicht !
Qaybaha shakhsiyadeed waa tayo sarreeya, shaqo-qabashadu aad bay u wanaagsan tahay.
Xawaaraha, firfircoonida iyo qaabka qaboobaha - taasi waa nasiib daro wadid! Xayeysiisyada MAXOfit waa fasal koowaad oo la shaqeynayo iyo damaanad - oo leh raaxeysiga oo dhan - xasilooni sare.
Adeegga macmiilka weyn! Qalabka qaybinta qaybaha qaybta ah waa la hubin
Xirmooyinka sarre ee tayo sarre leh, qoryo badan oo qoryo leh, cajalad ku duuban si aad ugu adkeysi badan
Xayawaan bixinta 10
FunTomia Camber Longboard Skateboard Drop Through Cruiser Komplettboard mit Mach1 High Speed Kugellager T-ToolAnzeige
Flex 2: FunTomia Camber Longboard - Dieses Board ist durch seine aufwendige Bambus-Ahornholz-Konstruktion perfekt für Fahrer(innen) mit einem Gewicht von ca. 25kg bis 84kg. - Länge 106cm - Breite 25cm - Gewicht 3,3kg
Boodhadhka aaladaha lagu yaqaan oo astaamo ahaan lagu dhisay waxay taageertaa heerka dabacsanaanta waxayna sahlaysaa wadista baabuurka Ereyga camber macnihiisu waa in alwaaxdu leedahay akhlaaq wanaagsan. Guddigu wuxuu kor u qaadaa ilaa 2 cm, taas oo keenta is beddel wanaagsan marka la bilaabayo. Xeelado badan ayaa suurtagal ah sanka iyo laabta.
Qalabka camber-ku wuxuu aad ugu habboon yahay guddi hawleed ama baraha bulshada. Qalabka camber-ku wuxuu sidoo kale ku habboon yahay xawaaraha sare wuxuuna leeyahay dabeecad hagitaan aad u wanaagsan. Xeelado badan ayaa suurtagal ah sanka iyo laabta.
Maqaalka xigtakursiga suunka